[SOMALI] Siyaabaha Kale ee Daraasadda Caafimaadka Dhimirka Xaaladaha Degdegga ah (MH)
Ujeedka daraasaddan waa in Magaalada Minneapolis lagu caawiyo in la soo aruuriyo macluumaadka waxa ay dadku la kulmaan marka ay ku jiraan xaalad ah caafimaadka dhimirka oo degdeg ah. Natiijooyinka daraasaddan waxaa loo adeegsan doonaa in lagu aqoonsado meelaha la hagaajinayo adeegga loogu talagalay dadka ku nool iyo kuwa soo booqda Minneapolis.
Hawshan ma aha warbixin. Haddii ay ku qabsato xaalad degdeg ah, fadlan garaac 911.
Daraasaddan waxaa ka jawaabaya qof kasta oo ay Minneapolis ku dhacday ama goobjoog u ahaa xaalad degdeg ah oo la xiriirta caafimaadka dhimirka .
Fadlan uga jawaab su'aalaha si daacadnimo leh. Daraasaddan waa mid aan la kala garan karin dadka iyo jawaabahooda oo waxa ay qaadaneyso waa 5 ilaa 10 daqiiqo. Jawaabaha dadka ma yeelan doonaan magac ama baratakoolka intarnetka (IP) ee marka shaashad looga jawaabayo.
Ogeysiis lagu Hagaajinayo Caafimaadka Dhimirka: Magaalada Minneapolis waxay kaaga mahad celineysaa jawaabahaaga wixii aad la kulantay, gaar ahaan wakhtigan oo uu dareen culus jiro.. Haddii aad hadda la tacaaleyso xanuun ah dhimirka, su'aalaha soo socda xanuunka ayey kugu kicin karaan. Waxaan kugula talineynaa inaad yareyso ama iska ilaaliso waxyaabaha xanuunka kugu kicin kara sida gaajada, daalka, iyo fuuqbax in uu kugu dhaco ka hor iyo ka dib.
Qaar ka mid ah calaamadaha guud ee walaaca waxaa ka mid ah: wadnaha oo degdeg u garaaca, murqaha oo adkaada, dareemid ah jahawareer, awood la'aan ah in aan waxba si caadi ah maskaxda loogu hayn karin, iwm.
Haddii xanuun ku qabto adigoo ka jawaabaya su'aalaha, waad ka boodboodi kartaa ama markii aad rabto ayaad daraasadda oo dhan iska joojin kartaa.
Haddii aad u baahan tahay in lagaa taageero dhibaatooyinka la xiriira caafimaadka dhimirka, hoos ka eego meelo aad la xiriiri karto:
Adeegyada caafimaadka dhimirka ee dadka waaweyn
Adeegyada caafimaadka dhimirka ee carruurta
Fadlan kala xiriir Xafiiska Waxqabadka & Hal-abuurka ee Minneapolis innovate@minneapolismn.gov wixii su'aalo ama walaac ah oo ku saabsan daraasaddan.